Umhla My Pet » 4 Izizathu A Profile Photo Ngaba Ukuphucula Ukufuna Yakho Love
ukubuyekezwa: Mar. 25 2020 | < 1
Ngomntu ezibalulekileyo kuqala
Siyazi ukuba akuhambi kwakuthetha ukuba, kodwa thina sonke unetyala “agweba incwadi nto inshorensi,” ingakumbi xa kuziwa kwi ukhangela umdlalo! Qiniseka ifoto yakho iprofayile ubonisa ufuna olona qhakamshelweno yakho.
Abantu Ungathanda ukubona ukuba bathetha Ukuze
Unokuba ubuntu emangaza kakhulu, kodwa ukuba umntu awele uthando kunye nawe ngaphambi kokuba uye wafumana akrotyiswe asiyonto ilula lwemisebenzi. Kodwa original umyalezo yakho yokuqala, bacinge kusenokwenzeka ukuba baphendule xa sibonile babhala ngubani kuqala.
Chance amahle okufumana Kubhencwa
Xa uphendla kwiwebhusayithi, abaninzi baya skrola iifoto amalungu ezithiywe uphendlo lwabo, elinde lowo obamba iliso labo. Ngaphandle ifoto, wena phantse imema imihla amandla Kwathi kuwe.
Amafoto Thetha Eliwaka Amagama, Phambi Utsalele Nokuba ochwetheziweyo One
Uyakwazi onokumxelela okuninzi malunga umntu kunye nokuba unyanisile kuba nina ifoto, ngoko ke sebenzisa oku intshayelelo kunilungele. Kutheni ukongeza koko omnye? Iifoto kuwe ngeenkalo ezahlukeneyo, ngokwenza izinto uyamthanda wenze zokuqalisa kakhulu incoko…
Ngoko ke, Ingaba ulunde ntoni? Bhalisa ngoku
pet vs. kuphisa Partner – Ngubani Uya Ndibabale?